Ighagharia echiche Geo-Engineering - Geofumadas
Ọktoba, 2019 Geospatial - GIS, Engineering, My egeomates
Anyị na-ebi oge pụrụ iche na njikọta nke ịdọ aka na ntị nke ọtụtụ afọ. Nyocha, imewe ụlọ, ịbịaru akara, nhazi usoro, atụmatụ, iwu, ahịa. Inye otu ihe atụ nke ihe ọdịnala na-agagharị na ọdịnala; linear maka ọrụ dị mfe, na-agbanwe agbanwe ma sie ike ijikwa dabere na ogo ọrụ ndị ahụ.
Taa, ihe ijuanya bụ na anyị ejirila usoro ọzụzụ ndị a jikọtara ya na, karịa teknụzụ maka njikwa data, ịkekọrịta usoro. Dị ka nke ahụ na o siri ike ịmata ebe ọrụ otu na-akwụsị na nke nke ọzọ na-amalite; ebe nnyefe nke ozi na-agwụ, mgbe ụdị nke ihe nlereanya nwụrụ, mgbe a ga-akwụsị ọrụ ahụ.
Geo-injini: anyị chọrọ okwu ọhụrụ.
Y’oburu na eme ya udiri otua, nke nebuputa nnabata ozi di nkpa maka oru ngo n’ime geospatial rue itinye ya n’iru nke ebum n’uche ya, ayi g’esi ike ikpo ya Geo-engineering. Ọ bụ ezie na ejikọtara okwu a na sayensị ụwa kpọmkwem na ọnọdụ ndị ọzọ, anyị anọghị n'oge ịkwanyere nkwekọrịta ugwu; ọzọ ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ọnọdụ geo-ọnọdụ aghọwo akụkụ dị mkpa nke azụmaahịa niile, yana ọhụụ nke Ihe BIM Ọ na-amanye anyị ka anyị chee na akụkụ nke Architecture, Engineering and Construction (AEC) agaghị adaba ma ọ bụrụ na anyị atụle njedebe nke nzọụkwụ ya ọzọ, nke bụ Ọrụ. Iche echiche n'ogo sara mbara na-achọ ka ị mata mmetụta dị ugbu a nke nchịkọta nke usoro, nke na-agafe karịa iwu nke ihe owuwu ma gbasaa na azụmaahịa ndị anaghị enwe nnọchi anya anụ ahụ, nke a na - ejikọtaghị naanị na ihe omuma data nke oma ma na nhazi na ntinye nke usoro.
Na mbipụta a N'ime akwụkwọ akụkọ anyị nabatara okwu a bụ Geo-Engineering.
Ókè ihe omuma ihe eji eme ihe.
Ruo ogologo oge, a hụla ọrụ dị iche iche na ọkwa ha dị ka isi etiti na onwe ha. Taa, anyị bi n'oge ebe, n'otu aka, ozi bụ ego mgbanwe site na njide ya ruo mkpofu; Mana ịrụ ọrụ nke ọma na-emezigharị ihe a na-eme iji mee ka nnweta data a bụrụ akụ nwere ike iwepụta arụmọrụ na nrụpụta ka ukwuu na mkpa ahịa.
Anyị na-ekwu maka ya gbasara silsi nke ihe ndị dị mkpa dị mkpa nke na-agbakwunye uru na omume mmadụ na nnukwu ọrụ na, abụghị naanị okwu injinia, bụ okwu metụtara ndị ahịa.
Usoro Usoro - ụkpụrụ na -ogologo oge gara aga- Ọ na - agbanwe ihe anyị na - eme.
Ọ bụrụ na anyị ga-ekwu maka usoro, anyị ga-ekwurịrị banyere ezigbo ọnụ ahịa, ime ka ọ dị mfe dabere na onye ọrụ njedebe, nke ihe ọhụrụ na ịchọpụta arụmọrụ iji mee ka itinye ego na-aba uru.
Usoro ndị a dabere na Njikwa Ozi. Ọtụtụ n'ime mgbalị mbụ e mere na 90s, na ọbịbịa nke kọmputa, bụ ịnwe njikwa nke ọma na ozi. N'otu akụkụ, ọ chọrọ iji belata ojiji nke usoro anụ ahụ na itinye uru nke mgbakọ na mgbakọ mgbagwoju anya; N'ihi ya, CAD anaghị agbanwe agbanwe na mbido, kama ọ na-eduga ha na nchịkwa dijitalụ; gaa n'ihu na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, nwere otu ozi ahụ, jiri eziokwu ahụ bụ na enwere ike iji ụlọ ọrụ mgbasa ozi mee ihe ugbu a. Iwu dechapụ na-anọchi iwu yiri ya, ortho-snap na 3 ogo square, okirikiri compass, mkpụbelata, ndebiri ihe nhichapụ na yabụ anyị mere ka anyị wụpụ na n'eziokwu adịghị mfe ma ọ bụ obere ihe, na-eche maka uru nke oyi akwa na n'oge ọzọ ga-apụta ịchọta atụmatụ ihe owuwu ahụ iji rụọ ọrụ na atụmatụ ma ọ bụ ịwụ mmiri. Mana oge ruru mgbe CAD mezuru nzube ya na akụkụ abụọ; ọ ghọrọ ihe na-agwụ ike karịsịa maka akụkụ obe, facades na ngosipụta aghụghọ-atọ; nke a bụ otú ụdị 2D si bịa tupu anyị akpọ ya BIM, na-eme ka usoro ndị a dị mfe ma na-agbanwe ọtụtụ ihe site na ihe anyị mere na XNUMXD CAD.
... n'ezie, njikwa 3D n'oge ahụ kwụsịrị na nnọkọ ọnụ ọgụgụ nke ejiri ndidi na ntachi obi nweta maka akụrụngwa nwere akụrụngwa ọ bụghị na agba ndị nwere agba.
Nnukwu ndị na-eweta sọftụwia maka ụlọ ọrụ AEC na-agbanwe ọrụ ha dabere na nnukwu akara ndị a, nke metụtara ikike nke ngwaike na nnabata ndị ọrụ. Ruo mgbe oge ruru mgbe njikwa ozi a ezughi oke, karịa na-ebupụ usoro, ijikọ data nnabata na ntinye aka nke metụtara akụkọ ihe mere eme nke ọrụ dabere na ngalaba.
Obere akụkọ. Ọ bụ ezie na ngalaba nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe nyocha maka arụmọrụ nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme, nnabata teknụzụ nke arụmọrụ arụmọrụ na ọnọdụ AEC abịaghị n'oge ma dabere na njikọta; Akụkụ nke taa siri ike ịkọwapụta belụsọ ma anyị esonyere n'oge ndị ahụ. Ọtụtụ atumatu sitere na iri asaa, ha na-enweta ike na iri asatọ na mbata nke kọmpụta nkeonwe nke na, ịnwe ike ịnọ na tebụl ọ bụla, na-agbakwunye na kọmpụta nwere nkwado nke ọdụ data, ihe osise raster, netwọkụ LAN dị n'ime na nke ahụ iwekota ọzụzụ metụtara. Nke a bụ azịza kwụ ọtọ maka iberibe ihe omimi dị ka nyocha, imewe ụkpụrụ ụlọ, nhazi usoro, atụmatụ atụmatụ mmefu ego, njikwa ngwa ahịa, atụmatụ ihe owuwu; ha niile nwere mmachi teknụzụ nke ezughi maka njikọta dị mma. Tụkwasị na nke a, ụkpụrụ dị adị na-adịghị adị, ndị na-eweta azịza tara ahụhụ site na usoro nchekwa nchekwa na, n'ezie, ụfọdụ iguzogide mgbanwe site na ụlọ ọrụ ahụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na mmejupụta nnabata siri ike ire na otu mmekọrita na arụmọrụ na eri arụmọrụ.
Ga site na ọkwa oge ochie nke ịkekọrịta ozi chọrọ ihe ọhụrụ. Ikekwe ihe kachasị mkpa dị mkpa bụ ntozu oke nke ịntanetị, nke, karịa inye anyị ohere nke izipu ozi ịntanetị na ịmegharị ibe weebụ na-agbanwe agbanwe, meghere ọnụ ụzọ mmekorita. Obodo ndị na-emekọrịta ihe n'oge web 2.0 kpaliri maka ịhazi, na-esite na atụmatụ ahụ Isi mmalite na ugbu a ha anaghịzi ada ụda ma bụrụ ndị anya ha na-ahụ ya n'anya ọhụụ. Ntụziaka GIS bụ otu n'ime ihe atụ kachasị mma, na-abịa megide nsogbu niile n'ọtụtụ oge iji merie sọftụwia nwere ikikere; ụgwọ na ruo ugbu a enwebeghị ike ịbanye na ụlọ ọrụ CAD-BIM. Ihe kwesiri igha site na ibu ha tutu ntozu oke nke echiche ma obi abụọ adịghị ya na mgbanwe na ahia ahia B2B na mmanu nke ijikọ ụwa ọnụ nke dabere na njikọta.
Nyaahụ, anyị mechiri anya anyị, anyị tetara n'ụra taa na-ahụ na ihe ndị dị ndụ dị ka geo-ọnọdụ aghọwo ma dị ka nsonaazụ ọ bụghị naanị mgbanwe na ụlọ ọrụ digitalization, mana mgbanwe mgbanwe na-enweghị atụ nke ahịa na n'ichepụta ahịa.
Usoro dabere na njikwa arụmọrụ. Usoro usoro a na - eduga anyị imebi paradigms nke nkewa nke ọzụzụ n'ụdị ngalaba nke ọfịs dị iche iche. Ndị otu nyocha ahụ gosipụtara ikike na digitization ike, ndị omenkà ahụ wee bụrụ ndị na-ese ihe akara dị mfe na ndị na-eme ihe ngosi; ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ na ndị injinia bịara na-achịkwa ụlọ ọrụ geospatial nke na-enyekwu data ekele maka ọnọdụ geo-ọnọdụ. Nke a gbanwere elekwasị anya site na obere nnyefe nke faịlụ ozi na usoro ebe ihe ihe nlere ahụ bụ naanị ọnụ nke faịlụ a na-enye nri n'etiti ọzụzụ nke nyocha, injinia obodo, ụlọ ọrụ, injinia ụlọ ọrụ, ahịa na geomatics.
Modeling Iche echiche banyere ụdị adịghị mfe, mana ọ mere. Taa o siri ike ịghọta na ibé ala, akwa mmiri, ụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè bụ otu. Ihe amụpụtara, na-eto, na-arụpụta ihe ma na-anwụ kwa ụbọchị.
BIM bụ echiche kachasị mma nke ụlọ ọrụ Geo-engineering rụtụrụla. Ikekwe onyinye ya kachasị ukwuu na ụzọ nhazi dị ka nguzozi n'etiti enweghị echiche na-enweghị atụ nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ngalaba teknụzụ na ọchịchọ maka ihe ngwọta nke onye ọrụ chọrọ site n'aka ndị ọrụ nzuzo na ụlọ ọrụ gọọmentị iji nye ọrụ ka mma ma ọ bụ rụpụta nsonaazụ kacha mma site na akụ ndị enyere ụlọ ọrụ. Nkwenye nke BIM, obu ezie na otutu ndi mmadu huru ya n'uzo pere mpe site na itinye aka na ihe ndi ozo, n'ezie nwere otutu ihe kariri mgbe anyi chere na ndi BIM bu ndi aturu ime na ogo di elu, ebe nmekorita nke usoro ihe di ndu tinyere ihe omuma. dị ka agụmakwụkwọ, ego, nchekwa, na ndị ọzọ.
Chakpụrụ dị ọnụ ahịa - site na ozi ruo na arụ ọrụ.
Taa, azịza ya anaghị elekwasị anya n’ịzaghachi ịdọ aka ná ntị a kapịrị ọnụ. Ngwunye ngwa ngwa maka ọrụ dị ka ịmegharị ihu na mbido ma ọ bụ mmefu ego emeela ka arịrịọ belata ma ọ bụrụ na enweghị ike ịbanye ha na mgbago, ala, ma ọ bụ usoro ndị yiri ya. Nke a bụ ihe kpatara na-akpali ndị isi ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ iji nye azịza nke na-edozi oke mkpa ya niile, na ọnụọgụ uru nke siri ike ike.
Ihe mejupụtara eriri a nwere usoro nke na-eji nwayọ mezuo ebumnuche, na-agbasa usoro ahịrị ma na-akwalite ihe yiri ya na arụmọrụ n'oge, ọnụ ahịa na traceability; ihe a na-apụghị izere ezere nke ụdị dị ugbu a.
Echiche nke Geo-engineering na-atụ aro usoro nke usoro, site na echiche nke ụdị azụmaahịa ruo mgbe rụpụtara nsonaazụ ndị a tụrụ anya. Na usoro ndị a dị iche iche, ihe kachasị mkpa maka ijikwa ozi ahụ ji nwayọọ nwayọọ belata ruo mgbe njikwa ọrụ ahụ; ma ruo n'ókè nke ihe ọhụrụ na-etinye ngwa ọrụ ọhụrụ, ọ ga-ekwe omume ime ka usoro dị mfe nke na-adịkwaghị aba uru. Dị ka ihe atụ:
Mbipụta nke atụmatụ kwụsịrị ịdị mkpa site n'oge a ga-ahụ anya nke ọma na ngwaọrụ dị mma, dị ka mbadamba ma ọ bụ Hololens.
Nchọpụta nke atụmatụ ala jikọtara ọnụ na njiri eserese map ma ọ bụ na - agbakwunye uru maka ụdị nke a agaghị ebipụta ya na ọkwa, nke ahụ ga na-agbanwe agbanwe mgbe niile nke chọrọ ntinye akwụkwọ ejikọghị na njirimara na-abụghị nke anụ ahụ dị ka obodo / ime obodo ma ọ bụ nke aka ya. mpaghara nchịkwa.
N'ime usoro a, ọ bụ mgbe onye ọrụ gosipụtara uru ọ bara iji akụrụngwa nyocha ya ọ bụghị naanị weghara data n'ọhịa, mana ị na-e modelomi tupu ị rute n'ọfịs, na-achọpụta na ọ bụ ntinye dị mfe ụbọchị ole na ole ọ ga - anata na ya a imewe na ị ga-echegharị maka owuwu ya. Ebe a na-echekwa nsonaazụ ubi ahụ na-akwụsị ịgbakwunye uru, ọ bụrụhaala na ọ dị mgbe achọrọ ya na njikwa nsụgharị ya; Yabụ, nhazi xyz enwetara n'ọhịa bụ naanị otu ihe dị mkpa nke igwe ojii na-akwụsị ịbụ ngwaahịa ma bụrụ ihe ntinye, ntinye ọzọ, ngwaahịa ikpeazụ nke na-apụtawanye na yinye ahụ. Ọ bụ ya mere anaghị ebipụta atụmatụ ahụ na akara akara ya, n'ihi na ọ naghị agbakwunye uru mgbe a na-agbada ya site na ngwaahịa gaa na ntinye nke ụdị echiche nke ụlọ, nke bụ ntinye ọzọ nke ụkpụrụ ụlọ, nke ga-enwe usoro nhazi, a electromechanical nlereanya, a na-ewu ụlọ nlereanya. Ihe niile, dị ka ụdị ejima dijitalụ nke ga-ejedebe na ụdị ọrụ nke ụlọ ahụ ewuru; ihe ibido ahịa na ndị ọchụnta ego ya tụrụ anya site na echiche ya.
Onyinye nke agbụ ahụ dị na uru agbakwunyere na ụdị echiche mbụ, na ọkwa dị iche iche site na njide, ịme ihe atụ, imewe, iwu na njikwa nke akụ ikpeazụ. Usoro nke na-adịchaghị usoro, na ebe ụlọ ọrụ AEC (Architecture, Engineering, Construction) chọrọ njikọ nke ịme ngosi nke ihe anụ ahụ dịka ala ma ọ bụ nrụpụta na-enweghị ihe anụ ahụ; ndị mmadụ, azụmahịa, na ndebanye aha ụbọchị, ọchịchị, mgbasa ozi, na mmekọrịta mmekọrịta akụ na ụba ụwa.
Njikwa Ozi + Ọrụ Ọrụ. Usoro nhazi bụ ihe a na-apụghị izere ezere.
Ogo ntozu ntozu oke yana njikọta n’ichepụta ihe ọmụma banyere ihe owuwu (BIM) na Production Management Cycle (PLM), na-ahụ usoro ihe atụ ọhụụ, nke dochiri anya mgbanwe Nchịkwa Ọchịchị nke Anọ (4IR).
Usoro ọhụụ na-esite na njikọta BIM + PLM.
Taa enwere ọtụtụ atụmatụ na-akpali okwu anyị ga-amụta kwa ụbọchị, nsonaazụ nke ihe omume BIM + PLM dị nso. Usoro ndị a gụnyere Intanet nke Ihe (IoT), Smart Cities, Digital Twins, 5G, Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), ịkpọ aha ole na ole. Ọ bụ ihe a na-enyo enyo ka ole ihe ndị a ga-apụ n'anya dị ka ndị na-ezughi oke, na-eche n'echiche dị adị banyere ihe ị ga-atụ anya ma na-ewepụta oge nke oge na ihe nkiri post-apocalyptic nke na-enyekwa eserese etu ọ ga - esi dị ... dị ka Hollywood si kwuo, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdachi na-akpata.
Nhazi ala. Echiche dabere na usoro njikwa njikwa mpaghara mpaghara.
Akwụkwọ ozi ahụ na-egosi ọhụụ zuru ụwa ọnụ nke ụdịdị dị iche iche nke na-enweghị ugbu a oge a kapịrị ọnụ, nke sitere na anyị si akpọ anyị Geo-Engineering. Ejirila nke a, n'etiti ndị ọzọ dị ka hashtag nwa oge na ihe omume nke ụlọ ọrụ ndị isi na ụlọ ọrụ ahụ, mana dị ka iwebata anyị si kwuo, ọ bịaghị nwee aha kwesịrị.
Ihe omuma ihe omuma a na-anwa igosi ihe n'eziokwu adighi mfe ijide ya, ma achoghi ya. Ọ bụrụ na anyị na-atụle ihe ndị dị mkpa nke ụlọ ọrụ dị iche iche na-agagharị na usoro ahụ niile, ọ bụ ezie na iji nyocha dị iche iche. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịchọpụta nke ahụ, n'agbanyeghị na ịme ihe atụ bụ echiche zuru oke, anyị nwere ike ịtụle na nnabata ya gafere usoro usoro echiche a:
Nkuputa Geospatial - CAD Mass - 3D Moding - BIM Conceptualization - Digital Twins Recycling - Smart City Integration.
Site n’ichepụta udiri ihe ngosi, anyị na-ahụ atụmanya nke ndị ọrụ ji nwayọ bịaruo eziokwu, opekata mpe na nkwa ndị a:
1D - Njikwa faili n'ụdị dijitalụ,
2D - Nkuchi usoro dijitalya dochie anya atughari edere
3D - Ihe ngbanwe nke akuku ato na uzo ala ya,
4D - versiontọ akụkọ mgbe ochie
5D - Ntinye nke akuku onodu aku na uba ya na onu ahia ya,
6D - Nlekọta nke usoro ndụ nke ihe akpọrọ, tinyere arụmọrụ nke ọnọdụ ha ozugbo.
Obi abụọ adịghị ya na echiche gara aga enwere echiche dị iche iche, ọkachasị n'ihi na itinye ihe nlere anya na-agbakọta ma ọ bụghị naanị. Ọhụụ ahụ egosiri bụ naanị ụzọ ntụgharị okwu site na elele nke ndị ọrụ hụrụ ka anyị nabatara mmepe teknụzụ na ụlọ ọrụ ahụ; Bụrụ nke a Injinia obodo, Nhazi, Injinia Ọrụ, Cadastre, Cartography ... ma ọ bụ nchịkọta ndị a niile na usoro agbakọrọ ọnụ.
Na ngwụcha, infographic na-egosi ntinye aka na nkuzi wetaara nhazi na idobe dijitalụ na ọrụ mmadụ kwa ụbọchị.
N'otu ụzọ, okwu ndị a butere mbọ ike maka mbọ ọhụrụ ndị mmadụ, ụlọ ọrụ, gọọmentị na ndị ọkachamara niile dugara n'ihe anyị na-ahụ ugbu a yana ọzụzụ zuru oke dịka Geographic Information Systems (GIS), onyinye nke nọchitere anya Kọmputa Enyemaka Kere (CAD), na-agbanwe na BIM ugbu a, nwere ihe ịma aka abụọ n'ihi nnabata ụkpụrụ mana yana ụzọ akọwapụtara nke ọma na ọkwa 5 nke ntozu okè (Ihe BIM).
Trendsfọdụ ọnọdụ dị na ụdịdị dị iche iche nke Geo-engineering dị ugbu a na-enwe nrụgide iji dozie echiche nke Digital Twins na Smart Cities; nke mbu dika ihe di omimi nke ime ngwa ngwa digitization n'okpuru ezi uche nke ikwenye nke oru oru; nke abụọ dị ka ezigbo ngwa ngwa. Smart Cities na-agbasapụ ọhụụ n'ọtụtụ ọzụzụ nwere ike ịbanye na ọhụụ nke etu ọrụ mmadụ kwesịrị ịdị na gburugburu ebe obibi, ijikwa akụkụ ndị dị ka mmiri, ike, idebe ihe ọcha, nri, agagharị, ọdịbendị, ibikọ ọnụ, akụrụngwa na akụnụba.
Mmetụta dị na ndị na-eweta ihe ngwọta dị oke mkpa, n'ihe banyere ụlọ ọrụ AEC, ngwanrọ, ngwaike na ndị na-eweta ọrụ ga-agarịrị ahịa onye ọrụ nke na-atụ anya karịa karịa eserese eserese na nsụgharị na-adọta anya. Agha ahụ dị n'akụkụ nkuku n'etiti ndị dike dị ka Hexagon, Trimble nwere ụdị yiri ya site na ahịa ha nwetara n'afọ ndị na-adịbeghị anya; AutoDesk + Esri na-achọ igodo anwansi nke jikọtara akụkụ ya buru ibu, Bentley na atụmatụ ọgbaghara ya nke gụnyere njikọta na Siemens, Microsoft na Topcon.
Oge a iwu nke egwuregwu ahụ dị iche; Ọ bụghị azịza azịza maka ndị nyocha, ndị injinia obodo ma ọ bụ ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ. Ndị ọrụ nke oge a na-atụ anya azịza zuru oke, lekwasịrị anya na usoro ọ bụghị na faịlụ ozi; nwekwuo nnwere onwe nke mmegharị ahaziri iche, yana ngwa ndị a na-emegharị n'oge niile, na-arụ ọrụ na karịa ihe niile n'otu ụdị ahụ na-akwado mwepụta nke ọrụ dị iche iche.
Obi abụọ adịghị ya na anyị na-ebi oke oge. Ọgbọ ndị ọhụrụ agaghị enwe ihe ùgwù nke ịhụ ọmụmụ na mmechi nke okirikiri na ụdịdị a nke Geo-engineering. Will gaghị ama ihe na-atọ ụtọ ọ bụ ịgba ọsọ AutoCAD na ọrụ 80-286 otu ọrụ, ndidi nke ichere maka ọkwa nke ụkpụrụ ụlọ ịpụta, yana enweghị olileanya enweghị ike igbu Lotus 123 ebe anyị nwere mpempe akwụkwọ ọnụahịa. ihuenyo ojii na akwụkwọ ozi oroma oroma. Ha agaghị enwe ike ịmata adrenaline nke ịhụ maka oge mbụ ka a na-achọkarị maapụ cadastral na raster ọnụọgụ abụọ na Microstation, na-agba ọsọ na Intergraph VAX. Kpamkpam, mba, ha agaghị.
N’atughi anya itu anya, ha ga ahu otutu ihe. Nwalee otu n'ime ihe mbụ nke Hololens na Amsterdam afọ ole na ole gara aga, weghachitere akụkụ nke mmetụta ahụ site na mbụ m zutere na nyiwe CAD. N'ezie, anyị na-eleghara akụkụ nke mgbanwe nke ụlọ ọrụ nke anọ a ga-enwe anya, nke ruo ugbu a anyị na-ahụ echiche, ihe ọhụụ maka anyị mana oge gboo tupu ihe ọ ga-apụta ime ka ọnọdụ ọhụrụ dịrị ebe ikike ịmụghị akwụkwọ ga-aba uru karịa ogo mmụta na afọ site na ahụmahụ.
Ihe doro anya bụ na ọ ga-abịa n’oge karịa ka anyị tụrụ anya.
Previous Post«Previous Enweghị mpaghara ndị ìsì nwere ọrụ Mosis
Next Post Akụkọ banyere Geo-Engineering - Afọ Infrastructure - YII2019Next »